अब्राहामको बाइबलीली कथाबारे पुरातत्व डेटा
पुरातात्विक प्रमाणहरू बाइबलको अब्राहामको बारेमा बाइबलमा
माटो ट्याब्लेट डेटा 4000 भन्दा बढी वर्ष पुरानो प्रदान गर्नुहोस्
पुरातत्व बाइबल कथाहरूको राम्रो-प्रमाणित तथ्याङ्कहरू हटाउन बाइबल इतिहासको सबैभन्दा ठूलो उपकरण हो। वास्तवमा, विगत केही दशकहरूमा पुरातत्त्वविद्हरूले अब्राहामको संसारमा बाइबलमा ठूलो कुरा सिकेका छन्। अब्राहामलाई विश्वको तीन महान मोनोथेटिक धर्महरू, यहूदी धर्म, ईसाईयत र इस्लामको आध्यात्मिक बुबा मानिन्छ।
पितृग्राही अब्राहाम बाइबलमा
इतिहासकारहरूले उत्पत्ति अध्याय 11 देखि 25 मा सुसमाचारको आधारमा अब्राहमको बाइबलीली कथाको 2000 ई.पू.को आसपासको मिति राखे।
पहिलो बाइबिल पैतृक अभिभावकलाई विचार गऱ्यो, अब्राहामको जीवन इतिहासले यो यात्रा सुरु गरेको छ जुन उरु भनिन्छ। अब्राहामको समयमा, उर सुमेरमा ठूलो शहर-राज्यहरूमध्ये एक थियो, फर्टाइल चक्रको एक भाग मिस्रमा डुबेर डग्राफ र ईफ्राट्स नद्राहरूबाट अवस्थित। इतिहासकारहरूले यो युग 3000 देखि 2000 ई.पू. सम्म "सभ्यताको बप्ति" लाई बुझेका छन् किनभने यसले समुदायमा बसोबास गरे र लेखन, कृषि र वाणिज्य जस्ता कुरा शुरु गरे जब यो प्रारम्भिक दस्तावेज गरिएको मितिहरू अंक गर्दछ।
उत्पत्ति 11:31 भन्छ कि अभिषेकका बुबा, तेरहले आफ्नो छोरालाई (जो अब्राहम भनिन्छ, उसलाई ईश्वरले अब्राहमको नाम दिइयो) र उनीहरूको विस्तारित परिवारले शहरबाट बाहिर निस्कने कुरदेन्स भनिन् । पुरातत्त्वविज्ञानहरूले यस अधिसूचनाको खोजी गर्न केहि रूपमा लिइन्, किनभने बाइबिल संसारको अनुसार : एक इस्ट्रिटेटेड एटला , कलेडियन एक जना जनजाति थिए जुन छैटौं र पाँचौं शताब्दी ई.पू.को वरिपरि अस्तित्वमा थिएनन्, लगभग 1,500 वर्ष अब्राहामले विश्वास गरेका थिए ।
चाडडेन्सको उर हरनभन्दा टाढा नपुगेको छ, जसका बासिन्दाहरू आज दक्षिणपश्चिमी टर्कीमा पाइन्छन्।
चाडडेन्सको सन्दर्भले बाइबिल इतिहासकारहरूलाई रोचक निष्कर्षमा पुर्यायो। Chaldeans छैटौं देखि पाँचौं शताब्दी ई.पू. को आसपास, जब यहूदी धर्मशास्त्रले अब्राहामको कथाको मौखिक परम्परालाई यस्तो लेखे कि उनी हिब्रू बाइबिल एक साथ राखे।
यसैले, मौखिक परम्पराले अब्राहाम र तिनको परिवारको शुरुवाती बिन्दुको रूपमा उल्लेख गरेको छ, इतिहासकारहरूले सोच्न थालेका थिए कि यो शास्त्रको लागि तार्किक हुने थियो जुन उनको अवधिमा थाहा थियो त्यो नामसँग सम्बन्धित थियो, बाइबिलिकल संसार भन्छ।
तथापि, पुरातत्वविद्हरूले गत साता दशकहरूमा नयाँ लाइट बसाल्दै आएका प्रमाणहरू पत्ता लगाएका छन् जसले अब्राहामको समयलाई अझ धेरै नजिक बनाएको छ।
माटो ट्याबलेटहरू प्रस्तावित प्राचीन डेटा
यी कलाकृतिहरूको बीचमा 20,000 मिट्टी ट्याब्लेटहरू आजको सिरियामा मरिआ शहरका खंडहरहरूमा गहिरो भित्र पाइन्छ। बाइबिलिकल वर्ल्डको अनुसार, मरि, सीरिया र इराक बीच सीमाको 30 किलोमिटर उफ्फ्रेट नदीमा अवस्थित थियो। यसको समयमा मारी बाबुल, मिश्र र फारस (आजको ईरान) बीचको व्यापार मार्गहरूमा एक प्रमुख केन्द्र थियो।
18 औं शताब्दी ईसामा मारी राजा जमिरी-लिमको राजधानी थियो जब सम्म राजा हम्मुरबीले विजय हासिल गरे र नष्ट गरे। 20 औं शताब्दी ईस्वीको अन्तमा, फ्रांसीसी पुरातत्त्वज्ञहरूले जमिरी-लमको पूर्व महललाई उजागर गर्न सदियों को रेत मार्फत माई डगको खोजी गर्छन्। खण्डहरूमा गहिराइ, तिनीहरूले पुरातन क्युनी वर्दी लिपिमा लेखिएका ट्याब्लेटहरू पत्ता लगाए, लेखनको पहिलो रूप हो।
जमिरी-लमको समय 200 वर्ष पहिले केही ट्याब्लेटहरू मितिमा राखिएको छ, जुन उनीहरूको त्यही समयको बारेमा बताउनेछ कि बाइबलले अब्राहामको परिवारलाई उर पठाउँछ।
मारी ट्याब्लेटबाट अनुवादित सूचनाले संकेत गर्दछ कि सिमेरियन उर, कलेडियन होइन, सम्भवतः इब्राहीम र तिनको परिवारले आफ्नो यात्रा सुरु गर्नुको सम्भव छ।
बाइबलमा अब्राहामको यात्राको कारण
उत्पत्ति 11: 31-32 ले कुनै संकेत दिँदैन किन अब्राहामका बुबा, तेरहले अचानक आफ्नो ठूलो विस्तारित परिवारलाई हारेका थिए र हेरा शहर तिर लागे, जो सिमेरियन उरको लगभग 500 माइल थियो। तथापि, मारी ट्याब्लेट अब्राहमको समयको वरिपरि राजनैतिक र सांस्कृतिक संघर्षको बारेमा जानकारी प्रदान गर्दछ कि विद्वानहरूले आफ्नो प्रवासको सुबिधा प्रदान गर्दछ।
बाइबिलिक संसारले नोट गर्छ कि केही मार्बी ट्याब्लेटहरू अमोरै जनजातिहरूबाट शब्दहरू प्रयोग गर्छन् जुन अब्राहामको कथामा पाइन्छ, जस्तै उनको बुबाको नाम, तेरह र तिनका भाइहरूको नामहरू, नाहरोर र हान (पनि विषम रूपले तिनीहरूको गन्तव्यको लागि नाम) ।
यी कलाकृतिहरू र अरूबाट, केही विद्वानहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् कि अब्राहामको परिवार अमोरिटिहरू हुनसक्ने एक सिमी जाति हो जुन 2100 ई.पू. को आसपास मेसोपोटामियाबाट बाहिर निस्कन थालिन्। अमोरहरु को प्रवास को उर, जो विद्वानहरुको अनुमान लगभग 1900 ई.पू.
यी निष्कर्षहरूको नतीजाको रूपमा, पुरातत्वविद्हरू अहिले आक्रोश गर्छन कि जो कि युगको सिभिल संघर्षबाट बचाउन चाहन्छन् जुन सुरक्षाको लागि केवल एक दिशा थियो: उत्तर। मेसोपोटानियाका दक्षिणी समुद्र अब फारसी खाडीको रुपमा चिनिने समुद्र थियो। खुला पर्वतमा पश्चिम को लागी कुनै चीज छैन। पूर्वतिर, उर देखि शरणार्थीहरूले ईलामिहरू, फारसबाट अर्को आदिवासी समूहको सामना गर्थे जसको भनाइ पनि उरको बिचमा छिटो बढ्यो।
यसकारण पुरातत्वविद्हरू र बाइबिल इतिहासकारहरूले निष्कर्ष निकाल्छन् कि यो तराह र तिनको परिवारको लागि तार्किक रहेको थियो जुन उनीहरूको जीवन र आस्थालाई बचाउन हान तिर उत्तरतिर लागे। तिनीहरूका माइग्रेसन तेरहका छोरा, अब्रामको यात्रामा पहिलो चरण थियो जुन उत्पत्ति 17:4मा परमेश्वरको राज्य हो जुन "राष्ट्रहरूका बहुमूल्य पिता" हो।
बाइबल पदहरू बाइबलमा अब्राहामको कथासित सम्बन्धित:
उत्पत्ति 11: 31-32: "तेरहले आफ्नो छोरा अब्राम र तिनका पोति लूत, हारानका छोरा र तिनका छोरी अरेमकी पत्नी, तिनका पुत्र अब्राम सरे, र उनीहरूलाई चाडडीहरूको उरूबाट बाहिर गए। कनानको भूमि; तर जब तिनीहरू हारान आए, तिनीहरू त्यहाँ बस्थे। तेरहका दिनहरू दुई सय पाँच वर्ष थिए र तीर हारानमा मरे। "
उत्पत्ति 17: 1-4: अब्राम अब नब्बे-9 वर्ष हुँदा, अब्राम अब्रामलाई देखा पर्यो र तिनलाई भने, 'म सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। मेरो सामु हिँड्नुहोस् र निर्दोष हुनुहोस्।
अनि म मेरो र मेरो बीचमा मेरो करार बनाउनेछु, र तिमीहरूलाई धेरै धेरै बनाउनेछु। ' त्यसपछि अब्राम उनको अनुहारमा पसे। अनि परमेश्वरले उसलाई भन्नुभयो, 'मेरो निम्ति, यो तिम्रो साथ मेरो करार हो: तिमीहरू राष्ट्रहरूको बहुमूल्य पुर्खा हुनेछौ।' "
> स्रोतहरु :
The Apocrypha को साथ ओक्सफोर्ड एनोटेटेड बाइबिल , नयाँ संशोधित मानक संस्करण (1 99 4)।
बाइबिल वर्ल्ड: ए इस्ट्रिस्टेटेड एटल (नेशनल ज्योग्राफिक 2007)
परमेश्वरले किन धेरै नामहरू राख्नुभयो?
तपाईं सबै बाँच्नुभएको छ जब येशू
यिन तांग: द "हॉल ऑफ छाप" एक्यूप्रेसचर प्वाइन्ट
Zhangzi's (Chuang-Tzu's) तितली सपना सपना
प्रलोभन र बौद्ध धर्म
ट्रांजिस्टर भनेको के हो?
एन्ड्रयू जैक्सनबाट उद्धरण
संगीतमा हर्मोनीको अर्थ
10 Megalodon को बारे मा दिलचस्प तथ्य
कसरी कन्जुगेट "ब्रुलर" (जलाउन)
आईएसआई र इराक र सिरियाको इस्लामी राज्यको परिभाषा
माउंटेन बाइक टायरमा कुन टायरको दबाव प्रयोग गर्नुपर्छ?
फ्रान्सेस्को डे ओरेलााना अमेजन नदी अभियान
बोल्नु भन्दा अझ कडा लेखन लेख्नु हुन्छ?
प्राचीन माया: युद्ध
Abington स्कूल जिल्ला v। Schempp र मूर्रे v। Curlett (1963)
VIZ मिडिया प्रकाशक प्रोफाइल
Namkaran - कसरि तपाईंको नाम को नाम
भूतपूर्व अचल सशर्त फारम वर्कशीटहरू
2019प्रेसिजन कप
Feminine Mystique के हो?
मेथोडिस्ट चर्च विश्वास र व्यवहार
पुरुषहरूको लागि प्रोत्साहनको शब्द
उत्सव, फ्लोरिडा - डिज्नीको योजना एक आदर्श समुदायको लागि
उत्तम-चिसो ताजा पानीको माछा के हो?